Malunga nathi - Yuyao Jera Line Lokulinganisa Co., Ltd.
I-YUYAO JERA LINE FITTING CO., LTD ngumzi-mveliso osekiweyo, okhulayo ka-2012, ovelisa isisombululo esipheleleyo seemveliso zokuhanjiswa kwentambo ye-fiber optic ngobuchwephesha be-FTTX kunye ne-FTTH kubugcisa bangaphandle, ngaphakathi. Umzi-mveliso weJera unesiseko esibanzi sendawo yokuvelisa izinto zefayibha ye-fiber yokwakha uthungelwano lonxibelelwano.
Umnqophiso wethu kukwanelisa amabango entengiso ngophuhliso lwetekhnoloji kumacandelo eshishini ahambelana nelona nqanaba liphezulu ngokusebenzisa iindlela ezintsha kunye nokwazi indlela.
Umbono wethu kukufezekisa ukubanakho kokuthwala ngokwenza imveliso ebanzi nethembekileyo yeemveliso zokwakha uthungelwano lonxibelelwano.
Uluhlu lwethu oluphambili lwemveliso lubandakanya:
● Iifayibha ze-FTTH kunye ne-ADSS iintambo
● FTTH lahla yamasango, FTTH lahla izibiyeli wocingo.
● Iifayibha ze-fiber optic zamasango kunye neebakaki ze-ADSS kunye ne-Figure 8 yeentambo zomyalezo.
● Iibhokisi zokuphelisa i-Fibre optic, i-FTB
● Ukuvalwa kwefiber optic splice. IFOSC
● Amacingo e-Helical wire guy abambelela kwi-ADSS kunye ne-Figure 8 cables cable.
● Inxulumene nemveliso yokuhambisa uthungelwano lwe-fiber optic, esetyenziswa kulwakhiwo lwenethiwekhi lwe-FTTx.
Ifektri yeJera-fiber ine-2500 yeemitha zesikwere, ineeyunithi ezininzi zezixhobo ezandayo ngokusisigxina.
Umzi-mveliso weJera usebenza ngokwe-ISO 9001: 2015, oku kuyasivumela ukuba sithengise kumazwe angaphezu kwama-40 kunye nemimandla enjengeYurophu, iCIS, uMzantsi noMntla Melika, uMbindi Mpuma, iAfrika neAsia.
Umgangatho weemveliso zeJera uqinisekisa ngentsebenziswano yezixhobo zonxibelelwano kunye neelebhu zomntu wesithathu ukuze anelise imigaqo nemarike yendawo yabathengi bethu. Sihlola zonke iimveliso ezikwilabhoratri yefektri ukwanelisa iimfuno zasekhaya kunye nemigangatho yesizwe yabathengi bethu.
Siyathemba ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi bethu ngokuyila okufanelekileyo kweemveliso, ixabiso elifanelekileyo, umgangatho wokuzithemba, i-OEM eguqukayo kunye nenkonzo ye-R & D ekhawulezayo.
Ngosuku ngalunye siphucula imveliso yethu ukufikelela kwimiceli mngeni emitsha yentengiso yehlabathi.
Wamkelekile ukuba sisebenzisane, injongo yethu izimisele ekwakheni ubudlelwane obunokuthenjwa, bexesha elide lweshishini ngexabiso elifanelekileyo, inkonzo ebanzi kunye nesisombululo semveliso ethembekileyo.